Ziziphi Elona Instagrammable Iindawo EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ziziphi Elona Instagrammable Iindawo EYurophu
Ukuhamba ngololiwe ingaba yenye yeendlela eziphambili uthola ilizwe elitsha - bezipholele impahla yakho, ubukele imbonakalo yelizwe roll ku yi. Kwaye kananjalo ndlela ibhetele ukufikelela iindawo ezininzi Instagrammable eYurophu!
Xa kuziwa ukuhamba, yakho phone kakhulu ngokuqinisekileyo yonke wena – ekuthatheni iifoto kunye neevidiyo nokudlala nezinto ezininzi izihluzi kunye nezihlokwana. Ukubhalwa uhambo lwakho, iholide yakho, yindlela enkulu ukubamba iinkumbulo yakho emangalisayo kwizixeko, amazwe, kwaye wenza indlela yakho ukuya oya kuyo. Hayi nje wena ukugcina ezi nkumbulo ukhangele phezu kwabo kwixesha elizayo, kodwa ungasebenzisa kwakhona Instagram ukwabelana la mathuba kunye nabahlobo bakho.
kodwa, apho ezi ndawo Instagrammable eYurophu? Xa amazwi ongenakufa Cady nguHeron ukusuka Iintombi ezikhohlakele, xa kufikwa inani lamathuba Instagrammable, lo umda ayikho.
Le ndawo kakhulu Instagrammable eYurophu: I Venice Simplon-aseMpumalanga-Express: London - Venice
Siza ngokubulala iintaka ezimbini ngelitye elinye apha. Le yenye nje kwiinkonzo ezininzi Uloliwe odumileyo ehlabathini kodwa ke kwiindawo ezininzi Instagrammable eYurophu. Nangona kukho ezimbalwa iindlela ezahlukeneyo ungakwazi ukuthatha, ethandwa kakhulu le London ukuba uhambo Venice. Xa usiphetheyo sifana uloliwe yakho Venice, ngoncedo Save A Isitimela, iinketho zakho akupheli!
RIALTO NEBHULORHO (RIALTO NEBHULORHO)
The Rialto Bridge is one of only four bridges crossing the Venetian Grand Canal, nto leyo ethetha ukuba kunzima kakhulu ifoto ngaphandle abantu kuwo. Enye ukhetho - njengazo zonke ezi zindawo - kukutyelela ekuseni kakhulu ekuseni.
I ukuthi noma ushiya idolophu ngaphandle kokuba ifoto Grand Canal. Loo nto yenza Venice, kuhle, Venice! Enye yezona iimbono konke oko ukusuka phezulu Rialto Bridge.
Le ndawo kakhulu Instagrammable eYurophu: I Bernina Express: Switzerland - Italy
Ukuhambela Chur ngo Swizalend no Tirano ngo ElamaTaliyane, uhambo 122km ekuthathela ngokusebenzisa mihle Swiss Alps. Perfect for Instagram!
Emva kokuba ufike e Switzerland, apha iindawo kakhulu Instagrammable:
THE TOBLERONE Intaba
Ngaba le ntaba khangela eziqhelekileyo? Ukuba ndayiva badle Toblerone bar, oko mhlawumbi! Yinto i intaba Oko kubonakalisiwe ekupakisheni kwaye kungenxa yoko kuluhlu lwethu lweyona ndawo inokuthenjwa nge-Instagram eYurophu.
Ukuze ufumane i-shot efanayo ngezantsi, ukuthatha uloliwe Gornergrat ukusuka Zermatt yonke indlela eya phezulu, ke uhambe phezulu ukuya okwindawo ephakami- (ezidlulileyo hotel).
Icebiso: i Iivenkile e Zermatt iphelelwe imivalo Toblerone kule shot ngqo! Ngoko ke, ukuba ufuna le shot kwaye andifuni ukuthatha amathuba akho ngoko qiniseka ukuba uthenga phambi kokuba ufika Zermatt.
Ukuba ulapha amazwe (ngamanye amazwi. paragliding) ngoko ngokungathandabuzekiyo uya zindingqavula ezithile amaqhawe Instagram kuqhume. Musa ukucinga ngathi ukunyuka uxinzelelo lwegazi lakho? Ungafumana edubuleyo epholileyo ukusuka phezulu saqina Kulm. Uza kufumana i imbono eningenakukholwa phezu kwidolophu Interlaken kunye zaseSwitzerland.
Le ndawo kakhulu Instagrammable eYurophu: I Brocken Railway. Harz Mountain Range, Jemani
Kule ndlela ethile, uya onokunyuka 1,142m-high Brocken, ephakeme kunazo ekumntla Jemani , yokuchitha indawo engezansi landscape ezingqonge. kodwa, akunyanzelekanga ukuba kuphela entabeni yanyukela kutyelela Harz Mountains. Inyaniso, ukuba kungcono ukuba uthanda iidolophu ukudlala fairytale iinqaba, UNESCO World Heritage Sites, Iinqaba, kunye neemonki ukusuka kumaxesha aphakathi, okanye ukubona izilwanyana zasendle kwindawo yazo yendalo. Perfect ukuze lakho Instagram!
Leipzig ku Wernigerode Brocken Uqeqesha
Hanover ku Wernigerode Brocken Uqeqesha
Munich ku Wernigerode Brocken Uqeqesha
EBerlin ku Wernigerode Brocken Uqeqesha
Visit Collegiate Church, Castle, kunye ne-Old Town yaseQuedlinburg
Ngenxa indibanisela Grunderzeit nobuGcisa Nouveau Villas, le Old Town ye Quedlinburg kwenza enye yeendawo ezininzi Instagrammable eYurophu. Yeyona inani nomgangatho ophezulu izakhiwo amaplanga-wayakha ndaqiniseka UNESCO ukuze ukubhengeza Quedlinburg umzekelo ezizodwa idolophu ephakathi European.
Leipzig ku Quedlinburg Uqeqesha
Hanover ku Quedlinburg Uqeqesha
Munich ku Quedlinburg Uqeqesha
EBerlin ku Quedlinburg Uqeqesha
I-West Highland Line: Scotland
Lihamba West Highland Line, i Jacobite Steam Train mhlawumbi eyona nto idume ngayo indima onayo kwi movie Harry uMbumbi - njengoko Hogwarts Express. Uloliwe uqhuba umgama oziikhilomitha 84-eyahlula Fort William ukususela Mallaig kwi-West Highland Railway Line. Isoloko ebizwa enye awaya mkhulu kaloliwe ehlabathini, kwaye kufaneleke njalo!
Jonga ezinye pics kubangela ukuba nokuthatha wena!
Le ndawo kakhulu instagrammable eYurophu: I Yellow Train, Fransi
Yithi: 'Ewe’ kule hambo! Ukuze ngaphezu kwenkulungwane, le imitha-gauge Uloliwe etyheli sele ngokubhijela indlela yayo ngokusebenzisa French zasePyrenees ukusuka Villefranche-de-Conflent ukuya Latour-de-UCarol. Yintoni awunazo kwebanga - nto iiyure kuphela 63km kwaye malunga ezintathu ubude - ngaphezu yenza phezulu izimvo Instagrammable ngokupheleleyo. Iintaba ezinkulu Parc Naturel Regional des zasePyrenees Catalanes engomnye kwabo!
Kwakhona ime kwisikhululo sikaloliwe aphezulu yaseFransi, Bolquere-Eyne. Yeyiphi uhleli 1592m ngaphezu komphakamo wolwandle, aze agqithe Pont Gisclard, a bridge ukumiswa kaloliwe.
Lyon ku Toulouse Uqeqesha
EMarseilles ku Toulouse Uqeqesha
Bordeaux ku Toulouse Uqeqesha
Bathethele ukuba ifowuni uze uhlaziye app lwakho Instagram. Lixesha babhukishe itikiti encedwa Gcina ATrain kwaye nokuthatha!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-instagrammable-spots-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)